ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သလဲ။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သလဲ။ El ဗတ္တိဇံသည် ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ရန် လူတစ်ဦး၏ လောကအသက်တာကို စွန့်ပယ်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။မရ။ ဓမ္မပညာအရ၊ ရေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ “အသက်တာသစ်” ကို စတင်နိုင်စေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ဝိညာဉ်ကို သန့်စင်စေသည်။ သခင်ယေရှု၏ခြေရာကို လိုက်လိုသူတိုင်းအတွက်၊ ဤပုံဆောင်ထုံးဖွဲ့မှုမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ယေရှုသည် အပြစ်မှလွတ်လျှင် အဘယ်ကြောင့် နှစ်ခြင်းခံသနည်း။?.
ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းဖို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ လိုအပ်တယ်။ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သော ကျမ်းစာပိုဒ်များမရ။ အဲဒါတွေ ထဲမှာ အဖြေတွေ့မယ်။
1 ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သလဲ– အကြောင်းရင်းအားလုံး
1.1 ယေရှုသည် မိမိ၏လက္ခဏာကိုဖော်ပြရန် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
1.2 ယေရှုသည် သူ၏ဓမ္မအမှုစတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
1.3 ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပုံသက်သေအဖြစ် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သလဲ– အကြောင်းရင်းအားလုံး
ယေရှုကို ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က နှစ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့အထောက်အထားကို ထုတ်ဖော်ဖို့၊ မင်းရဲ့ဓမ္မအမှုရဲ့အစကို အမှတ်အသားပြုပြီး ငါတို့အားလုံးအတွက် ပုံသက်သေဖြစ်ပါစေ။ ယေရှုသည် အပြစ်ကင်းစင်ပြီး နောင်တရရန် နှစ်ခြင်းခံရန် မလိုအပ်ပါ။
နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် လူများကို နှစ်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်ကို နောင်တရကြလိမ့်မည်။မရ။ သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူခြင်းအတွက် လူများ၏စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ယေရှု နှစ်ခြင်းခံရန် ကြွလာသောအခါ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် အလိုမရှိခဲ့ပေ။ ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ပြီး အပြစ်ကင်းသူဖြစ်ကြောင်း သူသိသည်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုကသူ့ကိုတရားမျှတမှုအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မရ။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်က သဘောတူပြီး ယေရှုကို နှစ်ခြင်းပေးတယ်။
ယောဟန်သည် သဲကန္တာရတွင် နှစ်ခြင်းခံပြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နောင်တ၏ဗတ္တိဇံကို ဟောပြောခဲ့သည်။
ထိုအခါ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းငှါ ဂါလိလဲပြည်မှ ယောဟန်ထံသို့ ယော်ဒန်မြစ်သို့ ကြွတော်မူ၏။
သို့ရာတွင် ယောဟန်က၊ ငါသည် သင်တို့၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရန် လိုအပ်ပြီး ငါ့ထံသို့လာမည်လောဟု ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် ယေရှုက၊ ယခုထွက်သွားပါ၊ တရားမျှတမှုအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဆင်ပြေသောကြောင့် ယခုထွက်သွားပါ။ ထို့နောက် သူမ သူ့ကို ထားခဲ့သည်။
ယေရှုသည် မိမိ၏လက္ခဏာကိုဖော်ပြရန် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် ရေမှကြွလာသောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်အသွင်ဖြင့် သူ့အပေါ်သို့ ဆင်းသက်ပြီး ကောင်းကင်က အသံတစ်ခုက “သင်သည် ငါ၏ချစ်လှစွာသောသား၊ ငါ မင်းကို ကျေနပ်တယ်။" ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ် လူသိရှင်ကြား အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။.
လူအပေါင်းတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံသောအခါ၊ ယေရှုသည်လည်း ဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊ ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ ကောင်းကင်ကိုဖွင့်၍၊ မင်းကို ငါကျေနပ်တယ်။
နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည်ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်သို့ ဆင်းသက်လာသည်ကိုမြင်သောအခါ၊ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်သတိပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု နှစ်ခြင်းခံသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် သူသည် ဤလောက၏ အပြစ်ကို ဖယ်ရှားပေးမည့် ကတိပြုသော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ယောဟန်ကလည်း၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်သည်ကို ငါမြင်၍ သူ့အပေါ်၌ တည်နေ၏။ ငါသည် သူ့ကို မသိ။ ရေနှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံရန် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရှင်က၊ ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍ သူ့အပေါ်၌ကျန်ကြွင်းသည်ကို သင်တို့မြင်ရသောသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ဗတ္တိဇံကိုပေးသောသူဖြစ်၏။ ငါသည်မြင်၍ ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ကို ငါသက်သေခံပြီ။
ယောဟန် ၅: ၂၈-၂၉
ယေရှုသည် သူ၏ဓမ္မအမှုစတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
ယေရှုသည် နှစ်ခြင်းမခံမီတွင် သာမန်လူတစ်ဦးအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး လူများကို သွန်သင်ဆုံးမခြင်း သို့မဟုတ် အံ့ဖွယ်အမှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ သူသည် လက်သမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု သိပ်မရှိပေ။ နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည် ကြီးထွားခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၏အဆုံးနှင့် ယေရှု၏လူထုဓမ္မအမှု၏အစဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် နှစ်ခြင်းခံသောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ဓမ္မအမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက် နောင်တရသော အပြစ်သားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ခံယူပါ။
သို့မဟုတ် ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသော ငါတို့ရှိသမျှသည် အသေခံခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ကို သင်တို့မသိကြသလော။
အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်ရကြမည်အကြောင်း၊
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပုံသက်သေအဖြစ် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စံနမူနာပြသူဖြစ်ပြီး သူပြုလေရာရာ၌၊ နောင်တ၏အရေးပါမှုကိုပြသရန် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် နောင်တသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏အပြစ်များကို နောင်တရပြီး သခင်ယေရှုအား ၎င်းတို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်လာကြသည်။
ခရစ်ယာန်ဗတ္တိဇံသည်လည်း အရေးကြီးသကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်အား ကတိသစ္စာပြုခြင်း၏ လက္ခဏာဖြစ်သည်။.
ဤအချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဗတ္တိဇံသည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း (ဇာတိပကတိ ညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ကောင်းသောသြတ္တပ္ပစိတ်ဆန္ဒအတိုင်း) ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူသော ယေရှုခရစ်၏ ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် တန်ခိုးများသည် သူ့အပေါ်တွင် ရှိနေသည်။
ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကို ထမ်းဆောင်ရန် လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားကြောင်း ယေရှုဖော်ပြခဲ့သည်။ ရယ် မိမိနောက်လိုက်ဖြစ်မည်ဟု ကတိပြုသူတိုင်း၏ ဗတ္တိဇံကို ခံယူရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်၍ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့၏တပည့်ဖြစ်စေလျက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။ ငါမှာထားသမျှတို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ၊ ကမ္ဘာမကုန်မှီတိုင်အောင် ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ နေ့တိုင်းရှိပါ၏။ အာမင်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးကမင်းနားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံတာလဲ။မရ။ အခုဖတ်ချင်ရင်တော့ နည်းနည်းပါးပါးဖတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်အား မည်ကဲ့သို့ ခွင့်လွှတ်ရမည်ကို ကျမ်းစာအကြံပြုချက်, ဆက်လက် browsing Discover.online ။